एनसेलको ‘डबल सापटी’ योजना - USNEPALNEWS.COM
एनसेलको ‘डबल सापटी’ योजना
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: August 2, 2017
एनसेलको सापटी सेवा अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले अब अझै बढी रकम सापटी लिन सक्ने भएका छन् । एनसेल प्रा. लिले सापटी सेवा सफलता पूर्वक संचालन गरेको पाँचौ वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा ‘डबल सापटी’ योजना ल्याएको हो ।
यस अन्तर्गत अब ग्राहकले उही सेवा शुल्कमा रु ४० सापटी लिएर अफ्ठ्यारो परिस्थितीमा दूरसञ्चार सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
सापटीको यो नयाँ योजना यहि साउन १८ देखि लागु हुनेछ । सापटी सेवा अन्र्तगतको रकममा वृद्धि गरी दोब्बर बनाइए पनि ग्राहकले पुरानै सेवा शुल्क रु २ (कर बाहेक) मा यो सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
आफ्नो मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सोभन्दा कम भई अफ्ठ्यारो परेको अवस्थामा ग्राहकलाई आवश्यक सञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि एनसेलले सन् २०१२ देखि सापटी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेवार समूदायले म्हः (आत्म) पूजा गर्दै
रासस	 October 28, 2019
जनता खाडीमा नेता गाडिमा नहुन, भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस, जय होस रबिन्द्र सर !
लोकमानका विषयमा निर्णय गर्ने दिन आईसकेको छैन : परराष्ट्रमन्त्री डा.महत